Is it really safe during7days before and after? – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Is it really safe during7days before and after?
မလာခင် ခုနစ်ရက် လာပြီး ခုနစ်ရက်ဆိုတာကို အဟုတ်မှတ်နေသူတွေ ဖတ်ဖို့
ဓမ္မတာ မလာခင် ခုနစ်ရက် လာပြီး ခုနစ်ရက်မှာ ချစ်တင်းနှောရင် ကိုယ်ဝန် မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ဘယ်သူက စလိုက်မှန်းတော့ မသိဘူး။ အတော်များများက ယုံကြည်နေကြတယ်။ အဲဒီလို ရက်တွက်ပြီး ရှောင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ဘလော့(ခ်)တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ATK’s Explicit Blog မှာ အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။ လိုအပ်သူများ သွားဖတ်တော်မူကြပါခင်ဗျား။
Author lettwebawPosted on 1 August 2010 18 October 2010 Categories Information
Previous Previous post: New Blog of Mine About Reproductive Health
Next Next post: Parkway Health